Hay’ada ICCAR oo Booqatay Dooxada Dharoor. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hay’ada ICCAR oo Booqatay Dooxada Dharoor.
Hay’ada ICCAR oo Booqatay Dooxada Dharoor.
July 6, 2019 - By: Mohamud Nadif
Hay’adda Maaraynta Saamaynta Isbeddelka Cimilada iyo Xaalufka (ICCAR) ayaa booqatay deegaanka Dharoor ee Degmada Isku-Shuban iyadoo ka samaysay cilmi baaris la xiriirta hanaankii ay dadka deegaanku ugu guuleysteen in ay xiiraan dooxada dharoor xiliyada ay roobabka da’aan.
Xubno matalayay hay’ada ICCAR ayaa qayb ka ahaa wafti uu hogaaminayay Wasiiru dawlaha deegaanka Puntland Cabdirashiid Geelle oo booqday dooxada dharoor xiligii la dib loo furayay, ICCAR ayaa kulamo iyo warsiyo gaar ah la yeelatay dadka deegaanka, maamulo iyo guud ahaan dadkii qaybta ka ahaa sidii loo xirmayn lahaa dooxada.
Axmed Cumar Ciise oo ka mid ah saraakiisha Hay’ada ICCAR waxa uu sheegay in halkaan ay u yimaadeen in ay daraaseeyaan dooxada dharoor si gaar a sida ay dadkaan ugu guuleysteen xirmaynta dooxada, caqabadaha qabsaday, dhibaatooyinka deegaan ee jira. iyo fariimaha ay la wadaagayaan bulshada kale, Axmed waxa uu sheegay in ay sii dayn doonaan natiijada daraasadaan ay sameeyeen.
sidoo kale Waxa uu tilmaamey in xirmaynta Dharoor ay ku jirto cashar loo baahan yahay in dadkaan lagaga daydo tuusaalena ay ugu noqdaan gobolada kale iyo dadyawga kale ee degan dhulka dooxooyinka ah isagoo tilmaamey in laga faaiday xirmayntii dooxada Dharoor.
1) Kala xiliyeynta daaqa oo lagu bartay
2) Dhir horey u dabar go’ay oo dib usoo baxday
3) Bilicda deegaanka oo soo noqotay
4) iyo Xoolihii oo helay calaf joogto ah.
Axmed wuxuu sheegay in ay jiraan haliso deegaan oo ay ka mid tahay in dooxada qaarkeed ay ku fidayaan boholo waaweyn oo samaysay, sidoo kale waxa uu sheegay in dooxooyinka qaar aysan biyo gaarin, si gaar ah wuxuu ugu mahadceliyay Dadka ku midaysan ururka Bulshada Dooxada Dharoor oo uu sheegay in ay waxbadan ka qabteen, biyo xireeno iyo mashaariic kalena ay fuliyeen dooxada Dharoor.